CMS sarudzo dzemaforamu pasi peakavhurika sosi marezinesi Linux Vakapindwa muropa
CMS sarudzo dzemaforamu pasi pemarezinesi akavhurika
Kunyangwe ivo vakarasa mukurumbira neruoko rwemagariro, maforamu anoramba achishanda paInternet. Kutevera na kuongorora kwedu yeakavhurika sosi sosi maererano nemamaneja emukati ataive tatanga nemablog, isu tichataura zvimwe zvekupa kwekusika yeyo yaive yekutanga yekudyidzana yekudyidzana chishandiso pawebhu.
1 Ndeapi maforamu?
2 CMS sarudzo dzemaforamu
A forum ndeye webhusaiti kana chikamu chewebhu webhusaiti umo vashandisi vanogovana pfungwa, mazano kana rubatsiro nekutumira mamesejiAya mameseji ari kunyanya mameseji, kunyangwe zvirimo mune imwe fomati zvinogona kuiswa Maforamu ivo vanosiyana neyekutaura nekuti ivo havambo gara uye vanogona kuverengerwa chero nguva. Maforamu se vanoita kunge mabloggi mune izvo zvirimo zvinoburitswa zvichiteerana, pane zvakakosha misiyano.
Sangano rekutanga rezviri mukati meblog iri Zuva reChinyorwa cheiyo posvo, iri muforamu iro rakakosha sangano iri Subforum Musoro weiyo tambo. Iyo tambo ine yekutanga post uye nhevedzano yemhinduro. Iyo tambo ine ichangoburwa posvo kana mhinduro inoratidzwa pekutanga mune subforum.
A blog zvine huwandu hushoma hwevanogadzira zvemukati. Vamwe vashandisi vanogona kutaura pane zvakaburitswa navo, asi kwete kukudziridza yavo misoro. Foramu nedudziro vane vanyori vakawanda. Chero ani zvake akanyoreswa kunyoreswa anogona kutanga yake tambo sekureba sekunge ivo vachiteerana nemitemo yakatarwa nevatungamiriri.
Blogs dzinochinja-chinja musimboti, ichive rekodhi yemafungiro ako, munyori kana vanyori vanogona kusarudza kusarudza misoro dzakasiyana, pachinzvimbo, maforamu anongobvumidzwa kumusoro wenyaya wakagadzwa nevatungamiriri, kunyange hazvo mamwe achiwanzo sanganisira sub-foramu ine dingindira. .
Ose maviri mablog uye maforamu anogona kugamuchira akawanda mafomati mafomati. Nekudaro, vatariri vemaforamu vanogona kumanikidza zvemukati midhiya kuti zviiswe kune ekunze masevhisi masevhisi kuti vasatore nzvimbo pane avo maseva.
Iyo inogona kubatsira, zvakare ita mutsauko pakati peblog, foramu uye pasocial network foramu. Iyo pasocial network muchinjikwa pakati peblog kana foramu. Iko kune mumwe munyori paakaunzi asi hapana yakakosha yemukati yekuodha system. Iye munyori anogona kumisikidza zvimwe zvisingabvumirwe kune vamwe vashandisi venetiweki kuti vaone nekudyidzana nezviri mukati mayo. Ose maviri mablog uye maforamu anonyanya kuchinjika muhurefu uye fomati yepakutanga kutumira uye mhinduro.
CMS sarudzo dzemaforamu
Mavara matatu ekutanga ezita i iInokurumidza uye isinga putsike hurukuro hurukuro kutanga. La kugadzirisa kunoitwa kuburikidza nekushandisa matemplate uye inogona kuturikirwa mune mimwe mitauro. Inoda sevha ine PHP rutsigiro uye kuisirwa kwayo kunokurumidza uye nyore kuburikidza nekushandisa masvikiro anotangwa nekuita script yakawanikwa kubva kubhurawuza.
Kugoverwa kwemushandisi mabasa kunoitwa kusimbisa mapoka uye kuona izvo mumwe nemumwe wavo anogona kuita.
FUDForum inogona zvakare kushandiswa seye yekutumira tsamba maneja, USENET nhau muverengi, uye seXML feed aggregator.
Zvinyorwa zvakakwana (muChirungu) zvinogona kuwanikwa pane yako foramu.
Pano tine chimwe chirevo eXtreme Message Board.
Ndicho zvemukati maneja isingaremi asi yakazara zvakazara kushandisa foramu. Kuisirwa kuri nyore sezvo iri imwe yemapurogiramu akaisirwa muSoftaculous, chirongwa chekuisa wizard iyo inowanzo kuverengerwa mune akawanda marongero ewebhu webhu. Ehezve, inogona zvakare kuiswa zvakananga.
Izvo zvinodiwa kuti uise iyo sevha ine rutsigiro rwePHP, injini yedhatabhesi yeMySQL uye kugona kutumira email.
Pawebsite yako vanozviti ndizvo yekutanga yakavhurwa sosi yezvinyorwa maneja maforamu akanyorwa muPHP uye vachishandisa MySQL. Shanduro yaro yekutanga ichibva muna1998.
Es yakanakira kushandiswa zvakanyanya sezvo ichigona kubata maforamu anopfuura mazana mana nemakumi mana kana anopfuura makumi maviri matsva matsva pazuva Kugadziriswa kunogona kuitwa uchishandisa html kodhi uye sisu mabhenefiti akawedzerwa nema module.
Kuisirwa kwayo kunoda sevha neshanduro dzazvino dzePHP neMySQL. Chinyorwa cheChirungu chakanyatso nzwisisika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » CMS sarudzo dzemaforamu pasi pemarezinesi akavhurika
- Hurukuro (GPLv2): https://www.discourse.org
Ini ndaizopedzisa iyo info mune ino chinyorwa neizvi: https://avantys.com/blog/que-es-un-cmc-tipos-de-cms/
Kana ikakubatsira iwe